Warar – Geelle Mag
Home » Warar
Millatariga Kenya oo gubay Gaadiid Ganacsi oo ka baxay Gudaha Soomaaliya
Ali Ahmed Posted On December 22, 2019
Ciidamada dalka Kenya ayaa waxaa la sheegay in ay dab qabad siiiyeen xalay laba Gaadiid Shixnado Ganacsi siday oo ka baxay Gudaha Soomaaliya xilli ay marayeen Xaduuda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya. Gaadiidkaan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaali ah oo […]
Xildhibaan eedeyn kulul usoo jeediyay Dowladda Federaalka
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka misana ah Guddoomiyaha guddiga difaaca ee Golaha Shacabka ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka in ay ka gaabisay wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo wareysi gaar ah […]
Kulankii Golaha Shacabka oo goordhoweyd furmay
Waxaa goordhoweyd furmay kulanka aan caadiga aheyn ee Golaha Shacabka, kaas oo su’aalo lagu weydiinayo Wasiiradda Wasaaradaha Caafimaadka iyo Gargaarka iyo ka hortagga Masiibooyinka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Kulanka waxaa shir guddoominayo guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Galaha […]
Abiy Ahmed oo ka hadlay weeraro diin ku saleysan oo ka dhacay Itoobiya
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa cambaareeyay rabshadaha diineed ee dalkaasi ka dhacay kadib markii weeraro lagu qaaday dhowr masaajid oo ku yaalla gobolka Amxaarada. Warbaahinta dowladda ku xiran ee Fana ayaa Sabtidii warisay in dhowr masaajid la weeraray, […]
Ururka Al-Shabaab oo weerar ka fuliyay duleedka Magaalada Mandheera
Waxaa faah-faahinno dheeraad ah ay kasoo baxayaan weerar dhowr jiho ah oo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen duleedka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Weerarka ayaa lagu soo warramayaa in si gaar […]
Guddoomiye Saleebaan “Soomaaliland wey isku filan tahay”
Guddoomiyaha Golaha Guurtida Maamulka Soomaaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa si adag ugu digay Wafdigii Beesha Caalamka ahaa ee dhowaan yimid magaalada Hargeysa ee Caasimada Maamulka Soomaaliland. Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa Wafdigaasi Beesha Caalamka ah uga digay in ay sameeyaan […]
Yuusuf Dabageed oo dhaliilay Madaxda Hir-Shabeelle
Guddoomiyahii hore ee Gobolka Hiiraan Mudane Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa sheegay inuu faraha ka baxay ammaanka deegaannada Maamulka Hir-Shabeelle, isla markaana madaxda Maamulkaasi ay dayaceen. Waxa uu sheegay inay xirmeen wadooyinka soo gala Magaalada Jowhar, sidoo kalena ay Al-Shabaab […]
Maamulka Puntland oo cambaareeyay qaraxii ka dhacay Gaalkacyo
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Maamulka Puntland Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa cambaareeyay qaraxii sababay dhimashada iyo dhaawaca ee xalay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha qarxa ayaa lagu […]
Shir hordhac u ah wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ka furmay Muqdisho
Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya ka furmay shir looga hadlayo sidii loo dardargelin lahaa wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana ka qeyb-galaya waxgarad matalaya Soomaaliland iyo gudiga wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee uu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya. Xubnaha ka […]
Taliyaha Ciidanka Dhulka oo faah faahin ka bixiyay qaraxii lagu weeraray
Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Xoogga dalka Sareeyo Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa faah faahin ka bixiyay qaraxii khasaaraha geystay ee xalay lagu weeraray xilli uu ku sugnaa Magaalada Gaalkacyo. Waxa uu sheegay in xilli ay ka baxeen Hotelka Five Star […]
© Copyright Geelle Magazine 2019